Siyaasiyiinta oo looga digay in ay shacabka kala qaybiyaan | Star FM
Home Wararka Kenya Siyaasiyiinta oo looga digay in ay shacabka kala qaybiyaan
Siyaasiyiinta oo looga digay in ay shacabka kala qaybiyaan
Golaha qaran ee hay’adaha aan dowliga ahayn ee NGOs ayaa ugu baaqay hoggaamiyaasha siyaasadeed ee dalka inay wada shaqeeyaan oo ay midoobaan ka hor inta aan la ansixin geddisocodka sharci beddelka ee warbixinta guddiga dib u heshiisiinta iyo mideynta shacabka ee BBI.
Bayaan uu soo saaray maanta guddoomiyaha golaha qaran ee hay’adaha aan dowliga ahayn ee NGOs Stephen Cheboi ayaa ka codsaday hoggaamiyeyaasha in ay midoobaan oo ay wada shaqeeyaan islamarkaana ay ka fogaadaan waxyaalaha keeni karo kala qaybin dadweyne iyo naceyb.
Waxaa uu carrabka ku adkeeyay in aan marnaba loo baahneyn in madaxda siyaasadeed ay jeediyaan hadallo ay dadka ku marin habaabinayaan.
Golaha ayaa sidoo kale ku booriyay dhamaan dadweynaha Kenyaanka inay marwalba mid ahaadaan.
Waxaa ay sidoo kale cambaareeyeen dhacdo qaar ka mid ah xildhibaanada ay ku dagaalamay goob uu aas ka dhacayay ee ismaamulka Kisii.
Previous articleDHAGEYSO:Dhallinyaro waday olole dhiig arruurin ah oo shir ku qabtay isbitaalka weyn ee Garissa
Next articleDHAGEYSO:Kumanaan qof oo hoy la’aan ku noqday ismaamulka Kisumu